RASMI: Madaxweynaha UEFA Aleksander Ceferin Oo Shaaciyay Wakhtiga La Dhammaystiri Karo Tartamada Champions League & Europe League - Gool24.Net
RASMI: Madaxweynaha UEFA Aleksander Ceferin Oo Shaaciyay Wakhtiga La Dhammaystiri Karo Tartamada Champions League & Europe League
Madaxweynaha UEFA ee Aleksander Ceferin ayaa war cusub kasoo saaray xilli ciyaareedkan 2019-20 gaar ahaan tartamada qaarada Yurub ugu xiisaha badan heer kooxeed ee UEFA Champions League iyo Europe League iyo waliba xilliga la dhammaystiri karo.
Dhammaan horyaalada qaarada Yurub ayaa loo hakiyay sababta xanuunka dunida ku fiday ee Korona balse wadamo kooban ayaa ilaa hadda ku dhawaaqay qorshaha ay xilli ciyaareedkooda dib ugu bilaabayaan.
Horyaaladii dalalka France iyo Holland ayaa gabi ahaanba halkii ay marayeen lagu kansalay iyadoo dawladaha dalkaasi ay shaaciyeen in dhammaan kulamada ciyaaruhu ay ganaaxan yihiin ilaa bisha September ee sanadkan.
Laakiin warka u wanaagsan kubadda cagta Yurub ayaa ah in horyaalka Bundesliga ee dalka Germany uu shalay oo Sabti ahayd dib u bilaabmay iyadoo madaxweyne Ceferin uu shaaca ka qaaday inay rajaynayaan in 80% kamid ah horyaalada la dhammaystiri doono.
Haddaba, Aleksander Ceferin oo hadda shaacinaya rajadiisa dhammaystirka tartamada Champions League iyo Europe League ayaa shaaciyay in haddii xaaladu sidan sii ahaato ay labadaas tartan dhammayn doonaan bisha August.
“Waxaanu qabnaa fikrad laakiin waa inaanu sugno gudida fulinta ee UEFA si aanu u shaacino taariikhaha, waxaan odhan karaa xilli ciyaareedka tartamada Yurub waa la dhammaystiri doonaa, haddii waxkasta ay ahaadaan sida ay haatan yihiin bisha August” ayuu yidhi Ceferin.
“Sida ay arrimuhu u muuqdaan haatan, waan hubaa inaanu dhammaystiri karo xilli ciyaareedka tartamada Yurub oo la micno ah tartanka UEFA”